Mayelana NATHI - Fuzhou Landtop Co, Ltd.
ungumkhiqizi ochwepheshe futhi umphakeli we-Dynamo, Alternator, Generator, Diesel Generator, Electric Electric, njll.
Ngeminyaka yentuthuko, ILANDTOP usekhule waba yinkampani enkulu, yesimanjemanje, ephelele futhi neyamazwe aphesheya. Umnyango wethu wokuthengisa utholakala Fuzhou City (Fuzhou Landtop Co, Ltd. & FUJIAN TOPS POWER CO., LTD.) Idolobha elisechwebeni lolwandle, elijabulela inethiwekhi yokuhamba elula. Siphinde sibe nefektri yethu e-Fu'an City (i-Fu'an Landtop Power Co, Ltd.) Isikhungo sethu sezwe lonke sitholakala eHongkong. Iqembu lethu lifakwe inombolo enkulu yemigqa yokuhlangana eqondile, amasistimu wokuhlola ahlanganisiwe nemishini yokuphuma. Sine onjiniyela abangochwepheshe, amalungu e-QC anamakhono, abathengisi abanolwazi kanye nezinsizakalo ezinhle kakhulu zangemva kokuthengisa. Inani lamanje lokukhiqiza elikhiqizwa ukuthengisa kwamanye amazwe lingaphezu kwezigidi ezili-15 zamadola aseMelika.
Sihlala senza imizamo emikhulu yokufeza ukuhlanganiswa kokukhiqiza nokuthengisa. Siyakwazi ukufeza izimfuno zamakhasimende ethu, sibanikeze imikhiqizo esezingeni eliphakeme. Imikhiqizo yethu, ngenxa yentengo efanelekile, ukusebenza kahle kakhulu kanye nokusebenza kokugcina amandla, idunyiswa kakhulu ngamakhasimende emazweni angaphezu kwezi-80 nezifunda, ezinjengeYurophu, Melika, iSoutheast Asia, i-Middle East, i-Afrika, njll.
Uhlelo lwe-Professional R&D, ubuchwepheshe obujwayelekile, ithimba le-QC elinamakhono neqembu lokuphatha elihamba phambili lingakunika isiqinisekiso esiqinile. Iqembu lethu ngokuqhubekayo lenza imizamo enkudlwana emisha yokusebenzisa kangcono amakhasimende ethu. Siqinisekisa ukuthi ukusebenzisana kwethu kuzosilethela inzuzo yethu.